13 May 2012 : ny Ankolafy RAVALOMANANA no tena fahavalon’ny EMMOREG
Nahatalanjona ny mponina teto an-drenivohitra rehetra ny zava-nitranga teny amin’ny Kianjan’ny 13 May androany. Tontosa « tsy nisy tomika » ny hetsiky ny vondron’ny mpanohitra ho fankalazana ny fahatsiarovana ny hetsi-bahoaka tamin’ny 13 May 1972. Tsy nisy tomika satria tsy nahitana mpitandro filaminana na iray aza teny Analakely sy ny manodidina saingy teny Anosy izy ireo no tazan’ny mpandalo nanao karatra tao anaty fiara toy ny fanaony. Nanomboka tamin’ny 02 ora sy sasany tolakandro anefa ny hetsika notarihin’i Lalatiana Ravololomanana sy ny namany ary afaka nidina avy any amin’ny « esplanade » nihazo ny Kianjan’ny 13 May izy ireo nametraka ny fehezam-boninkazo teo amin’ny vavahadin’ny rano mifitsitra (jet d’eau) manoloana ny lapan’ny tanàna.
Sary Analakely androany
Taorian’izay dia niriaria tsara teo amin’ity Kianja ity ny olom-pirenena nanaraka izany hetsika izany ary nisy mihitsy aza ny nahavita nandoro koadiarana teo amin’ny sampanana manoloana ny IFM na CCAC teo aloha ho fanehoana ny tsy fankasitrahana ny fitondrana saingy tsy nahataitra ny EMMO izany.
Mazava ny resaka …
Tsy ela akory fa vao omaly dia namoahana ireo fiara tsy mataho-dalana vaovao miaraka amin’ny hery famoretana mirongo basy ny mpanara-dia ny Ankolafy RAVALOMANANA teny Ambohijatovo. Ny Kianja notokanan’i tgv ho an’ny Demokrasia anefa no nangatahin’ny mpandala ny ara-dalàna saingy tsy nomena izany. Nandritra ny dian’ny vahaoaka nihazo an’i Magro dia nobahanan’ny hery famoretana avokoa ireo sampanana mihazo ny Kianjan’ny 13 May rehetra mba tsy hisian’ny olona afaka hivily lalana hihazo izany kianja izany. Mazava izao fa toy ny fahavalo mihitsy ny fijerin’ny FATE sy ny mpanara-dia azy ny Ankolafy RAVALOMANANA ary tsy azony leferina izay mety ho fanehoan-kevitra eo ambany fiahian’izany firehena politika izany noho ny fahatahorany azy. Ny EMMOREG manokana dia hentitra mihitsy amin’ny fanatanterahana izany baikon’ny mpanongam-panjakana izany ary voaporofo tao anatin’ny telo taona izany. Anjaran’ny Ankolafy RAVALOMANANA izany no mieritreritra na mbola manana antenaina amin’i tgv sy ny mpanara-dia azy izy ireo na tsia. Androany aloha dia namaly ny antson’ity vondron’ny mpanohitra ity ihany koa ny Ankolafy ka ny Me. Hanitra Razafimanantsoa no nitarika ny delegasiona tamin’izany.
28 Aprily 2012 : Kianjan'Ambohijatovo
Ambohijatovo en live
11H35 : Efa feno olona ny eny Ambohijatovo sy ny manodidina. Bahanan'ny mpitandro ny filaminana ny vavahadin'ny Kianjan'ny demokrasia. Maherin'ny 20 ny fiara mataho-dàlana, ary maherin'ny 10 ny kamio feno mpitandro ny filaminana. Misy GSIS ihany koa eran'ny tànana, toa efa miomana sahady ny hampiasa hery amin'ny vahoaka.
12H18 : Efa tonga eny Analakely ny andiany voalohany amin'ireo Ct sy Cst.
13H10 : Mamoaka "banderoles" ny mpitolona ary miodidina ny tsangambaton'ny 29 marsa. " Filoha Ravalomanana ny fanavotana ny Malagasy", santionan'izany banderole izany.
14H40 : Tonga eny Ambohijatovo ny filohan'ny CT, Mamy Rakotoarivelo, Me Hanitra Razafimanantsoa ary Zafilahy Stanislas .
14H59 : Raikitra ny fanapoahana baomba fandatsahan-dranomaso efa ho 30 miaraka amin'ny grenade assourdissante 2. Nanapoahan'ny mpitandro ny filaminana izany ihany ny filohan'ny Ct Mamy Rakotoarivelo sy ireo ministra, Cst ary Ct ny ankolafy Ravalomanana. Niparitaka ny vahoaka ary henjehin'ny mpitandro ny filaminana eran'ny tànana, hatreny amin'ny 13 mai.
Efa 5m tsy hahavakian'ny sakan'ny mpitandro ny filaminana no narefotra ireo baomba manempotra sy mandatsa-dranomaso
15H14 : Olona iray no voasambotra ireo mpitandro ny filaminana. Mitohy ny fanenjehana ny vahoaka.
15H18 : Tonga eny Ambohijatovo ny lehiben'ny Bureau de Liaison Sadc,Sandile Schalk. Mitady ny lehiben'ny Emmo Reg.
15H30 : Vaovao mila hamarinina.
Nisy zaza latsaky ny herintaona, tratry ny lakrimozena ary avy dia sempotra. Nisy ramatoa roa nianjera vokatry ny fanenjehana ny iray tsy hita ny iray avotry ny olona.
Tazana teny indray ilay mersenaran'ny FATE :
15H56 : Manomboka miverina tsikelikely eny Ambohijatovo ny olona.
16H25 : Mitohy ny fisamborana. Sivily iray indray izao no voasambotra
16H57 : Tonga eny amin'ny Kianjan'ny Behoririka Mamy Rakotoarivelo, Hanitra Razafimanantsoa, Benja Andriamihanta, Olga Ramalason miaraka amin'ireo Cst sy Ct amin'izao fotoana
17H20: Olona 40 naratra ary iray namoy ny ainy. Io no vokatry vonjimaika ny tolona androany raha ny nambaran'i Mamy Rakotoarivelo, araka ny tatitra avy any amin'ny HJRA.
Sauvons Madagascar: manifestation à Paris le 17 mars 2012
Olona iray no naratra mafy teo amin'ny tongony teny Ambohijatovo androany vokatry ny tifitra nahazo azy. Tsy mbola fantatra aloha ny zavatra nahavoa azy na bala tena izy na tsia fa raha ny dian'ny ratra eny aminy dia tsy lehibe toy ny "grenade lacrymogène" no nahavoa azy fa toy ny diam-bala. Nijininika ny rà ary mpitolona niaraka taminy no niangavy fiara iray hitondra azy tany amin'ny toeram-pitsaboana akaiky indrindra. Ankoatra izay dia nirefodrefotra tsy nifankahitana ny baomba mandatsa-dranomaso nandravan'ny hery famoretana ny vahoaka nanotrona ny Pr. Zafy Albert. Rehefa tsy tafiditra tao anaty Kianjan'Ambohijatovo manko ity Filoham-pirenena teo aloha ity dia nitety ny toerana nisy ny vahoaka hanambara tamin'izy ireo fa "fanombohana ny androany fa tsy faran'ny tolona akory". Nandritra izay no nangatahan'ny vahoaka ny hidinana teny amin'y Kianjan'ny 13 May saingy nilaza ny Profesora fa "tsy mbola androany no hanaovana izany". Tao anatin'izany anefa dia efa raikitra ny tifitra lakrimozena sy poa-basy vitsivitsy ary dia voatery niparitaka ny vahoaka. Hatreto aloha dia tsy fantatra na nisy ny voasambotra na tsia fa io naratra iray io no fantatra fa nizaka ny herisetran'ny FATE indray amin'izao tsingerin-taona faha-telo nitokanan'i TGV ny "kianjan'ny demokrasiany" izao.
"Fanombohana ny androany fa tsy fiafarana" hoy ny Profesora raha nitafa tamin'ny mpanao gazety ny tenany. Notsoriny fa porofo mitohaka amin'ny tenda ny zava-misy androany raha ny fanosihosena ny demokrasia eto Madagasikara no resahina. "Ity kianja ity" hoy izy " dia notokanana mba azahoana maneho hevitra an-kalalahana tsy mila fangatahana fazahoan-dalana saingy rehefa tonga eo amin'ny fitondrana ny sasany telo taona aty aoriana dia mampihatra jadona". Nambarany moa fa midika avy hatrany fanaovana tsinontsinona ny praiministra izao fanakanana ny hetsika izao satria ity farany, izay tomponandraikitra voalohany amin'ny filaminana, dia efa nanome alalana azy ireo fony niarahaba azy nahatratra ny taona vaovao.